Apple waxay ogeysiinaysaa dadka isticmaala iCloud ee isbeddelada keydinta | Wararka IPhone
Sida inbadan oo idinka mid ah horeyba u ogtahay, Apple waxay ku dhawaaqday kororka keydinta inta lagu gudajiray muxaadaradii ugu dambeysay ee lagu soo bandhigay iPad Pro, iPhone 6s iyo jiilka afaraad ee cusub Apple TV. Sidaa darteed, kuwa ku jira Cupertino waxay bilaabeen inay u digtoonaadaan dadka isticmaala iCloud isbeddelada sicirka ee lagu dhawaaqay, shirkaddu waxay u direysaa emayl dhammaan isticmaaleyaasha lacagta bixinaya. si looga digo in kaydintooda la ballaadhin doono iyadoon wax laga beddelin qiimaha bil kasta ee ay qandaraaska ku qaateen illaa hadda.
Marka la soo koobo, kuwa aan ogeyn, Apple ayaa tirtiray mid ka mid ah ikhtiyaarrada kaydinta ee iCloud, iyada oo laga dhigayo saddex ikhtiyaar, ka raqiisan kuwii hore iyo qiimaha soo socda:
50GB - € 0,99 / bishii
200GB - € 2,99 / bishii
1TB - € 9,99 / bishii
Shaki la'aan waa war wanaagsan iyo dhiirigelin, maaddaama isticmaaleyaasha bixinaya € 0,99 ee 20GB bishiiba ay hadda ka badan yihiin labanlaab awoodda ay ku raaxeysanayeen illaa hadda, ku dhowaad hal euro, way adag tahay in la helo adeeg si isku mid ah loo wada dhan yahay qalabkaaga Apple oo ku siiya 50GB bishii.
Ilaa aad rabto inaad beddesho qorshooyinka, waa inaad gebi ahaanba sameysaa waxba si aad ugu cusbooneysiiso keydintaada awoodaha cusub, qorshaha hadda waxaa lagu cusbooneysiin doonaa analogga ku yaal liiska biilka soo socda, oo ku siinaya fursado cusub oo aad ku kaydin karto iyada oo aan wax lacag ah lagaa qaadin. Apple sidoo kale waxay cusbooneysiisay dukumintigeeda caawimaadda iyo taageerada ee loogu talagalay iCloud, oo ay ku jiraan qiimaha cusub ee la bixiyo, halkaas oo aad ku arki karto waxa qiimaha xaddidan uu u yahay waddankaaga lacagtaada qaran.
Waxa nasiib daro ah oo aan isbadalin ayaa ah in Apple ay siiso adeegsadayaasheeda kaliya 5GB oo kayd ah oo bilaash ah keydka iyo waxyaabaha kale, gabi ahaanba naadir ah oo aan ku habooneyn qalab heer sare ah sida iPhone, iPad ama kombiyuutar kasta oo Apple ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Apple waxay ogeysiinaysaa dadka isticmaala iCloud ee isbeddelada keydinta
Iyo kuweena wali qorshooyinka sanadlaha ah wata? Ma jirtaa waddo loogu haajiro kuwa hadda jira iyada oo aan lumin qaybta saamiga ah ee aan horay u bixinnay?
Hagaag, waxaan siiyay 12 qof oo reer Mexico ah hadana waxay gaartay ilaa 17 pesos….
Haa, waad kordhisay booska wax lagu keydiyo, laakiin sidoo kale waad kordhisay qiimaha oo digniin la'aan ... taasi sax maahan.
Waxay ku faafinayeen koontadayda iCloud, phishing ayaan u sameeyay si aan dib ugu helo iyo sidoo kale iPhone-kayga
Ku jawaab Alberto raygoza